Apple Watch 2 ichave yakareruka nekutenda kune yakatetepa skrini | Ndinobva mac
Apple Watch 2 ichave yakareruka nekutenda kune yakatetepa skrini
Javier Porcar | | Apple Watch, Rumo
Sabemos que mharidzo yeApple Watch 2 iri kuuya pasi. Isu tine tariro kwazvo yekuona izvo zvitsva munhau inokosha yamangwana, se chigadzirwa senge chidiki seApple Watch, inosanganisira kuwanda kwakawanda mushanduro yega yega. Uye zvakare, iyo makwikwi neiyo Gear S3 inoda kuita kuti zvinhu zviomere Apple, kunyanya mune chigadzirwa chine mukana.
Maawa mashoma apfuura, Byte akatiratidza mune vhidhiyo kuenzanisa kwazvino wachi pamwe neanofungidzirwa mutsva. Zvakawanda zvainge zvataurwa nezve a akareruka kupfuura ayo akamutangira uye neakakwira chinzvimbo bhatiri izvo zvaizopa kuzvitonga kwakakwirira.
Sezvakatarisirwa, takawana itsva zvishoma mutete LCD chidzitiro uchienzaniswa neyepakutanga uye pachinzvimbo, bhatiri rinoonekera zvakanyanya. Iwe unogona kuona muvhidhiyo kuti zviyero zvakawanikwa zvine chekuita nechidzitiro zviri 2,86 mm uye 2,12 mm kana kuyerwa kwacho kukaitwa mune yakatetepa kana yakatetepa chikamu. Chiyero chakafanana chakaitwa mune yakatangira, 3,57 mm uye 2,99 mm zvakawanikwa zvakateerana.
Kune rimwe divi, uku kuonda kunotendeuka kana tikataura nezve bhatiri, chinhu chinokosheswa sezvo chimwe chezvikumbiro zvewachi nyowani chiri chikuru kuzvitonga. Iyo data yakawanikwa iri 5,11 mm, ichienzaniswa ne3,95 mm kuyerwa nebhatiri reiyo yekutanga Apple Watch. Naizvozvo, iyeBhatiri raizove rine simba zvakanyanya ne 1,28 WH kana ichienzaniswa ne0,98 .XNUMX WH kumberi. Kune rimwe divi, isu tichawana akawanda maawa ekushandisa kwewachi yedu tisingapfuure mukuchajisa mabhatiri, asi isu tinofanirwa zvakare kuziva kuti kuiswa kweiyo itsva GPS chipinodikanwa nevazhinji vashandisi vemitambo, inozoderedza maawa ekushandisa.
Saka, Takatarisana newachi hombe kana diki here? Zvose zvinoita sezviri kuratidza izvozvo chitarisiko uye zviyero hazvizo shanduke zvakanyanya (yakanakira mhando iyo inoda kusimbisa modhi) Izvo zvinoita sekunge iyo modhi nyowani ichave iri nekukurumidza, iine mamwe maficha uye iine kuzvitonga kuzhinji, maererano neruzivo rwechangobva kuitika.
Iko kushoma kuti uone kuti ndeupi wavo anozopedzisira apinzwa muApple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Rumo » Apple Watch 2 ichave yakareruka nekutenda kune yakatetepa skrini
iOS 9 inowanikwa pane 88% yemidziyo yakatsigirwa
Kuuya kweiyo iPhone nyowani isina jack kunokonzeresa chechitatu-bato bluetooth headphone sumo